Plastic ngowani & there
Child nemishonga ngowani
CHII CHINONZI A 'kupedzisa'?
A mudziyo pamutsipa kumugumo anosarudza pakukura uye mhando kuvhara kunodiwa kuzadzisa chisimbiso zvakakodzera. A mudziyo chacho runoenzanirana chivharo kuva chienderane apedzerana. Zvinangwa zvedu, tichaongorora zvitaera maviri akasiyana apedzerana uye sei kuziva mumwe. The Glass kavha Institute (GPI), basa sangano rinomiririra North America girazi mudziyo maindasitiri, akaita akatambanudza nohurongwa fananidza apedzerana mutsipa mhiri indasitiri.
Kuramba Thread -abbreviated "CT", chinopfuurira shinda kuvharwa vanonzi nhamba mbiri vakaparadzana neboka backslash (Eks. 38/400). Nhamba yokutanga inotaura dhayamita munhu akapiwa kuvhara, iyo unotaurwa millimeters. The nhamba yechipiri, akawana shure backslash, rinoreva imwe kumugumo maitiro.
Lug -also aizivikanwa somunhu "kumonyanisa Off" kupera (rakapfupikiswa "T / O"), Lug apedzerana vari chete kuwanikwa musi girazi midziyo. Lug apedza vangazivikanwa sezvo dhayamita (kureva 38mm) achiteverwa T / O (rakapfupikiswa nokuti monyorora-Off) -38mm T / O
The kunze dhayamita yacho neshinda. The kushivirira siyana "T" divi achasarudza mumwe pakati bottle kuvhara.
The dhayamita yomukati pamusoro bhodhoro mutsipa. Magadzirirwo zvinoda kushoma "Ini" kubvumira Clearance kuti ichizadza sepombi. Linerless kuvharwa, ane chivhariso kana nyika chisimbiso, uye pakupa plugs uye fitments inoda inodzorwa "Ini" divi kuti zvakakodzera ukamubvundisa.
Akayera kubva pamusoro kukupedzisira pamusoro kumucheto wokutanga neshinda. The "S" divi ndiko chinhu chinoratidza dzidziso yacho kuvhara kuti bottle uwandu shinda ndakawandirwa nebasa pakati bottle chivharo.
The kunze dhayamita kwemitsipa. Kusiyana "E" uye "T" kukura yakakamurwa vaviri anosarudza neshinda udzamu.
Kukwirira pamutsipa kumugumo. Akayera kubva pamusoro pamutsipa kusvikira apo dhayamita "T", akawedzera pasi, intersects pamafudzi.